बीपीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली - नेपालबहस
बीपीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली
| १७:४८:५५ मा प्रकाशित
नेपालको राजनीतिक आयाममा एउटा विशिष्ठ नेताकाे नाम सदावहार रहेकाे छ– उनी हुन् बीपी कोइराला । राणाशासन विरुद्ध नेपाली जनतामा चेतनाको बीजारोपण गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेका बीपीका चिन्तन र विचार आजपनि सान्दर्भिक छन् । नेपाली राजनीतिमा उनी अमर अजर छन् । छ दशक अघि उनले देखेको सपना अहिलेपनि नेपालमा उत्तिकै सामयिक छ । चाहे राजनीतिमा होस् वा साहित्यमा बीपी कालजयी बनेको नाम हो ।
उनै बीपी कोइरालालाई आज उनका अनुयायीहरुले स्मरण गर्दैछन् । बीपीले स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले १०७ औं जन्मजयन्ती तीन दिनसम्म भव्यताका साथ मनाउने भएको छ । त्यसका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले नै कार्यक्रम तय गरेको छ ।
आज हुने भर्चुअल मिटिङमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवोधन गर्दैछन् । अर्थात, बीपीलाई आज नेताहरुले स्मरण गर्नेछन् । तर तिनै मध्ये कतिपय नेताले बीपीले के योगदान दिएका थिए, वा बीपी चिन्तन भनेको के हो भन्नेबारे दुई मिनेट बोल्ने ल्याकत राख्दैनन् ।
१९७१ साल भाद्र २४ गते जन्मेका बीपीले लामो समय संघर्षमा बिताए । भारतको स्वतन्त्रता संग्रामदेखि नेपालको राणाशाहीविरुद्ध बीपी अग्रमोर्चामा भिड्ने योद्धा थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा समेत राजनीतिक स्वतन्त्रता मिल्ने उनको बुझाई थियो । त्यसैले उनले २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गरे । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि स्थापित सुवर्णशमशेर राणाको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेससँग ००६ सालमा एकीकरण गरे । त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको आन्दोलनले ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो ।
राणा शासन त ढल्यो । तर राणा प्रधानमन्त्री कायमै थिए । दिल्ली सम्झौता अनुसार, मोहन समशेर कै नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा बीपी गृहमन्त्री रहे । त्यसपछि मात्रिकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा अर्काे सरकार बन्यो । लामो समयको अस्थिरतापछि ०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा बीपी नेतृत्वको कांग्रेसले दुई तिहाई मतका साथ सरकार बनायो ।
त्यसबेला बीपी नेतृत्वको सरकारले जसको जोत उसैको पोत भन्ने नीति पास गरेको थियो । जसलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति भनियो । त्यसयताका कुनैपनि सरकारले बीपी जत्तिको क्रान्तिकारी कदम चाल्न सकेका छैनन् । विर्ता उन्मूलन गर्ने उनको निर्णयबाट त्यतिखेर ठूलाबडाको सातो गएको थियो । साथै, जनताबीच बीपीको लोकप्रियता चुलिन थालेको थियो ।राजा महेन्द्रले बीपीको लोकप्रियतालाई पचाउन सकेनन् ।
अनेक बहाना झिकेर उनले ०१७ साल पुस १ मा प्रजातन्त्रकै हत्या गरिदिए । साथै, बीपीलाई बन्दी बनाए । लामो समय सुन्दरीजलमा बन्दी जीवन विताएका बीपीलाई ०२५ सालमा रिहा गरियो । त्यसपछि उनी लगातार आठ बर्ष भारतमा निर्वासित भएर बसे । अन्ततः उनले भारतमा बसेर नेपालमा संघर्ष गर्न नसकिने निश्कर्ष निकाल्दै बरु राजासँग मेलमिलाप गर्ने भन्दै ०३३ साल पुस १६ गते स्वदेश फर्के । अनि लगातार संघर्ष जारी राखे । यसैक्रममा उनी ०३९ साउन ६ गते घाँटीको क्यान्सरबाट परमधाम भए ।
बीपीले सधैं नेपाली राजनीतिलाई मिहिन ढंगले केलाउने गर्थे । उनी भन्थे– कांग्रेस सत्तामा गयो भने सुकिलामुकिला र हुनेखानेको हालीमुहाली हुनेछ, त्यसका विरुद्ध आम कार्यकर्ताले एकपटक फेरि संघर्ष गर्नुपर्छ । नभन्दै अहिले कांग्रेसको हालत त्यस्तै छ । पार्टीमा लामो संघर्ष र बलिदानी दिनेहरु सडकमा छन् । तर नेतालाई नजराना चढाउनेहरु महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । देशका सबैभन्दा धनी विनोद चौधरी आज नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनले कांग्रेस निर्माण गर्न के कति योगदान दिए कसैलाई थाहा छैन । हिजोसम्म अर्काे पार्टीको प्रतिनिधि रहेका उनै चौधरी के आधारमा कांग्रेस कोटामा सांसद भए त्यसको जवाफ देउवाले वा अरु कसैले दिनुपर्दैन ?
यो त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । यस्ता अनगिन्ती नाम रहेका छन् । बीपी चिन्तनले यसलाई कत्तिको जायज मान्छ ? देउवाहरुले जवाफ दिउन् । संकटका बेला बीपी आफै अग्रसर हुन्थे । कहाँ कसलाई कुन जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने उनमा राम्रो हेक्का थियो । त्यसैले उनले पछिल्लो कालखण्डमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यबाहक सभापति बनाए । बीपीलाई त्यसको महत्वबारे ज्ञान थियो । तर अहिले देउवालाई मर्नेबेला पनि सभापति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिएको छ ।
त्यागको प्रतिमूर्तिलाई आदर्श मान्ने हो भने देउवाहरुले आजैबाट राजनीतिक विश्रामको घोषणा गरे हुन्छ । कांग्रेसलाई बीपीको आदर्श बमोजिम चलाउने हो भने अब समय सापेक्ष जुझारु कांग्रेस बनाउने संकल्प लिनुपर्छ । त्यसका लागि फेरि नेतृत्वको दावा गर्ने लोभीपापी नेताहरुले ठूलो छाती देखाउन । त्यो नै बीपीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
देउवाको चाल, पौडेलको ढाल ! काम लाग्ला त कांग्रेस बचाउन ? ४ दिन पहिले
आज पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीको १०७ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै ३ हप्ता पहिले
सभापति देउवाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रदै पौडेल समूह ३ हप्ता पहिले
तयारीविना रेल मार्ग ठेक्कापट्टाको हतारो गर्नु अनुचित : नेता पौडेल ४ हप्ता पहिले
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठक शुरु भर्खरै
देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु, पौडेल र सिटौलाबीच छलफल भर्खरै
खोलाले बगाउँदा वृद्ध दम्पतिको मृत्यु ४ मिनेट पहिले
नगद ९८ हजारसहित १३ जना जुवाडे पक्राउ ६ मिनेट पहिले
पोखराबाट लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ ११ मिनेट पहिले
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन १३ मिनेट पहिले
आज विश्व पर्यटन दिवस: एउटै मञ्चमा ५० देशका राष्ट्रगान गुञ्जिए ! १९ मिनेट पहिले
नव गायिका अश्मिता परियारको नयाँ गित “कुन सुरुवात” २१ मिनेट पहिले
प्रमोद र सुजाताको ‘ओई कान्छी’ मा पल र पुजाको रोमान्स ३१ मिनेट पहिले
झापाका संक्रमितको विराटनगरमा ज्यान गयो ३२ मिनेट पहिले
विदेशमा कोरोनाबाट थप २१ जना नेपालीको मृत्यु : एनआरएनए ४२ मिनेट पहिले
पद्मश्री साहित्य सम्मान ‘हंस’लाई, तर प्रश्रितसँग पुरस्कार नलिने उप्रेतिको घोषणा ४५ मिनेट पहिले
निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही शुरु ४७ मिनेट पहिले
प्रभु बैंकको नेतृत्वमा सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ५९ मिनेट पहिले